Isbarbardhigga mobilada: Doogee V10 vs Doogee V20 | Warka gadget
Isbarbardhigga mobilada: Doogee V10 vs Doogee V20
Miguel Hernández | 20/12/2021 08:51 | Mobiles, Telefoon
Doogee waxa uu suuqa ka sii wadaa sharaadka talefannada gacanta ee casriga ah iyo kuwa qallafsan, taas oo ah, waxay leeyihiin astaamo taxane ah oo ka dhigaya kuwo gaar ah oo gaar ahaan adkaysi u leh. Tani waa sida ay u yimaadeen inay soo saaraan V20, oo ah qalab u taagan sidii ay u dhammaatay dhowr sano oo khibrad iyo dadaal ah. Doogee V20-ka cusub waa kan si toos ah u beddelay Doogee V10, oo ah moodal keenay natiijooyin wanaagsan. Labada qalabba waxay leeyihiin xoogaa isku mid ah, laakiin sida iska cad waxay leeyihiin kala duwanaansho weyn sababtoo ah hal-abuurnimada weyn ee sannadihii la soo dhaafay, waxaan is barbar dhignay.
Ka faaideyso Doogee V20 Dual 5G dalab adigoo iska diiwaan gelinaya 1.000-ka qof ee ugu horreeya ee iibsada.
1 U ekaanshaha labada qalab
2 Farqiga u dhexeeya labada qalab
U ekaanshaha labada qalab
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay iskaga mid yihiin labada qalab ayaa ah in ay labadooduba ka soo bilowdaan fikradda ah in haddii ay jabin waayaan aanay ahayn in la hagaajiyo. Labada noocba waxay ku dhejiyaan processor-ka siddeed-core si ay u horumariyaan waxqabadkooda oo ay u bixiyaan sifooyin sida ay u kala horreeyaan maalinta. Si la mid ah. Waxay leeyihiin dareeraha sawirka faraha oo ku yaal dhinaca daanka aaladda, kamarad selfie 16MP ah iyo ku dallaca degdega ah ilaa 33W oo ay la socoto NFC iyo taageerida soo noqnoqoshooyin badan oo ka dhigaya inay aad ugu habboon yihiin dhul kasta.
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, labada qalabba waxay leeyihiin shahaadooyinka ugu sarreeya marka loo eego caabbinta cimilada xun ee dhammaan noocyada kala duwan sida. IP68, IP69K iyo dabcan heerka militariga ee MIL-STD-810 oo leh shahaadadeeda.
Si kastaba ha ahaatee, hadda waa waqtigii diiradda la saari lahaa kala duwanaanshaha muuqda.
Farqiga u dhexeeya labada qalab
Sifo ka duwan, Doogee V10 hore waxa uu dhabarka ku lahaa heerkulbeeg infrared ah si uu si dhakhso ah u cabbiro heerkulka, si kastaba ha ahaatee, Doogee V20 waxay rabeen inay tallaabo dheeraad ah qaadaan waxayna dhabarka ku soo kordhiyeen shaashad cusub oo na siin doonta macluumaad gaar ah sida ogeysiisyo, waqtiga iyo wax ka badan. Wax ilaa hadda aan ku aragnay oo keliya qaar ka mid ah terminal-dhamaadka sare.
Shaashad AMOLED ka wanaagsan oo leh xallin dheeraad ah
Shaashada danbe si aad macluumaad noogu siiso
Shaashada hore ama kan ugu weyn ayaa sidoo kale qaaday boodbood muhiim ah, waxaana hadda leenahay shaashad dhalaalaysa AMOLED oo leh 6,43-inch FHD + xallin, kaas oo u imanaya inuu beddelo 6,39-inji HD + xallinta LCD ee lagu rakibay Doogee V10. Tani waxay shaki la'aan ahayd mid ka mid ah boodada ugu muhiimsan ee la qabsiga tignoolajiyada jiilkii ugu dambeeyay, si la mid ah Guddiga AMOLED ee Doogee V20 ee ay soo saartay Samsung ayaa ku siin doona saamiga 20: 9 marka la barbardhigo 19: 9 ee Doogee V10, oo leh isbarbardhig weyn iyo awoodaha HDR, sidoo kale hagaajinta iftiinka ay awood u leedahay inay bixiso.
Xaaladdan oo kale cabbirka mAh ee batteriga si weyn ayaa loo dhimay, Halka Doogee V10 uu bixiyay 8.500 mAh, Doogee V20 cusub wuxuu joogi doonaa 6.000 mAh. In kasta oo labadooduba ay sii wadaan kharashka 33W ee degdegga ah, Doogee V20 cusub wuxuu bixin doonaa dallacaadda wireless-ka oo leh heerka Qi oo gaaraya 15W, taas oo dhaaftay 10W ee dallacaadda bilaa-waayirka ah ee Doogee V10 uu ilaa hadda hayo. Tani waxay ka dhigaysaa Doogee V20 mid cufan oo fudud, si kastaba ha ahaatee, Doogee wuxuu ballan qaadayaa in wakhtiga isticmaalka qalabka lagu hayo batari awood hoose ah sababtoo ah hagaajinta labadaba Nidaamka hawlgalka iyo heerka qalabka, dhammaan Tani waxay si cad uga faa'iideysanayaan guddiga AMOLED in ay hadda isticmaala oo wanaajiya isticmaalka shaashadda.
Kaamirada ayaa ah mid kale oo ka mid ah qodobbada ay saameynta ugu badan ku yeelatay dib u habeynta, bal aan eegno labada kamaradood:
64MP kamarad weyn
20MP kamarad aragga habeenkii
8MP kamarad xagal ballaadhan
48MP kamarad weyn
2MP Kamarada Macro
Halkaa laga bilaabo kamaradu si cajiib ah ayey u roonaatay sidaan aragnay, inta ay hadhsan tahay (sida aan hore u sheegnay) waxqabadka wanaagsan ee kamarada selfie 16MP xagga hore.
Heerka xusuusta iyo kaydinta, Doogee V20 wuxuu ka koraa 128GB ee V10 ilaa 256GB ee moodeelka hadda jira, iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada UFS 2.2 si loo horumariyo waxqabadka wareejinta xogta. Dabcan, 8GB ee xusuusta RAM ee labada qalabba waa la ilaaliyaa.
Waxaa la odhan karaa Doogee V20 waa horumar muuqda oo ujeedkiisu yahay in la ilaaliyo dhaxalka Doogee V10, sii socoshada Taxanaha Doogee V oo isna la bixin doono qiimo dhimis weyn iyo soo jeedin ku saabsan bogga rasmiga ah ee Doogee. Taariikhda siideynta ayaa lagu dhawaaqi doonaa muddo gaaban waxaana la soo dhaweyn doonaa dadka jecel telefoonada adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Isbarbardhigga mobilada: Doogee V10 vs Doogee V20
Elite 3, Jabra ikhtiyaarkeeda ugu jaban, waxay ilaalisaa tayada [Dib u eegis]
Petkit Pura X, sanduuqa qashinka ee bisadaada oo caqli badan oo is nadiifisa